Virus Outbreak Exposes Perils of Exotic Wildlife Trade | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalVirus Outbreak Exposes Perils of Exotic Wildlife Trade
A worker inaprotective suit is seen at the closed seafood market in Wuhan, Hubei province, China, January 10, 2020. The seafood market is linked to the outbreak of the pneumonia caused by the new strain of coronavirus, but some patients diagnosed with the new coronavirus deny exposure to this market.
A new coronavirus spreading from the city of Wuhan has putaspotlight on China’s poorly regulated wild animal trade – driven by relentless demand for exotic delicacies and ingredients for traditional medicine.
More than 500 people have been infected by the new flu-like virus that authorities say emerged from illegally traded wildlife inaseafood market in the central Chinese city.
ဝူဟန်မြို့မှ စတင်ပြန့်နှံ့လာသော coronavirus ကြောင့် ဥပဒေဖြင့် ထိန်းကြောင်းမှုအားနည်းသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ကုန်သွယ်မှုအပေါ် လူသိများလာသည်။ ရှားပါးပစ္စည်းများ ဝယ်လိုခြင်း၊ ရိုးရာဆေးဝါးများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြခြင်းတို့က အဆိုပါ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်ပေါ်အောင် တွန်းပေးနေသည်။
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၊ တရားမဝင် သတ်ဖြတ်ထားသော တိရစ္ဆာန်များကို အတူတကွရောင်းချနေသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဆိုပါ ဈေးကွက်များမှာ ရောဂါအသစ်များစတင်ပေါက်ဖွားရာ၊ ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဒုက္ခပေးနိုင်သော ဗိုင်းရပ်များ ပေါ်ပေါက်ကာ လူသို့ကူးစက်သည်အထိ ဖြစ်နိုင်လောက်စေသော နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။
အဆိုပါ မြို့ရှိ ပင်လယ်စာဈေးရှိ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုမှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည့် အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်သည် လူပေါင်း ငါးရာကျော်ကို ကူးစက်ထားပြီးဖြစ်သည်။
“Coronavirus အသစ်ရဲ့ ဇစ်မြစ်ကတော့ ဝူဟန်ပင်လယ်စာဈေးကွက်အတွင်းမှာ တရားမဝင်ရောင်းချနေတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Gao Fu က ပြောသည်။
ကနဦး သုတေသနများအရ ဝူဟန်‌ဗိုင်းရပ်စ်သည် ယင်း၏ ကနဦးဖြစ်ပေါ်မှုတွင် မြွေမှ လူသို့ ကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆထားသည်။ သို့သော် တရုတ်အစိုးရ၏ ကျန်းမာရေး အကြံပေးဖြစ်သူ Zhong Nanshan ကတော့ ယင်းဗိုင်းရပ်စ်များသည် ခွေးတူဝက်တူသတ္တဝါများ၊ ‌ကြွက်များက စသည်ဟု ဆိုသည်။
တောရိုင်းတိရစ္ဆန်ရောင်းဝယ်ခြင်းက ဇီဝမျိုးကွဲများအပေါ် ထိခိုက်မှုရှိကာ ဈေးအတွင်း ရောဂါအသစ်များ ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများက မကြာခဏ ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။
SARS ရောဂါပိုးအပါအဝင်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အ‌ရှေ့တောင်အာရှတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အသားစိမ်း၊ ငါးစိမ်း၊ ကုန်စိမ်းဈေးများမှ စဖြစ်သည်ဟု မကြာခဏ ထောက်ပြခံခဲ့ရသည်။
ဝူဟန်ဈေး မပိတ်မီ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်က ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံများတွင် ‌လှောင်အိမ်ထဲ ထည့်လှောင်ထားသည့် မြွေများ၊ ဖြူးကောင်များ၊ မြေခွေးများကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ ဈေးတွင် မျိုးသုဥ်း ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဖြစ်နေသော သင်းခွေချပ်အပါအဝင် တိရစ္ဆာန်အမျိုးပေါင်း ၅၀ ခန့်ကို ရောင်းချနေကြသည်ဟု သတင်းမီဒီယာများက ဖော်ပြကြသည်။
‌ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်တါင် ဝူဟန်နှင့် အခြားနေရာရှိ အာဏာပိုင်များသည် ဆေးများ၊ တိရစ္ဆာန်ရုံများ၊ ‌သစ်တောပန်းခြံများကို ပိတ်ခဲ့ပြီး ကြက်အရှင်ရောင်းချမှု၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သယ်ယူရောင်းချမှုများကိုလည်း ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
SourceDavid Stanway and Sophie Yu(Reuters)
Next articleIn Huawei Battle, China Threatens Germany ‘Where it Hurts’